မြစ်ဆုံ: တန်ဖိုးကြီးမားလှသော ဇီဝဇိုး ငှက်များ၏ ငှက်သိုက်
တန်ဖိုးကြီးမားလှသော ဇီဝဇိုး ငှက်များ၏ ငှက်သိုက်
တနင်္သာရီတိုင်း၊ မြိတ်မြို.၊ ကမ်းနားလမ်းတွင် တည်ရှိသည်. အထက်ပါနေအိမ်သည် အလွန်တန်ဖိုးကြီးမားသည်. ငှက်သိုက်များ အန်ထုတ်ပေးသည်. ငှက်များအသိုက်ဖွဲ. နေထိုင်လာခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ် နီးပါးရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်​။
တစ်ပိသာလျင် သိန်းသုံးဆယ်ဝန်းကျင်မျှ တန်ကြေးရှိသည်. အဆိုပါငှက်သိုက်များကို ပြုလုပ်ပေးနေသည်. ငှက်မှာ ဇီဝဇိုး ငှက်ဖြစ်သည်။ ထိုငှက်၏သဘာဝသည် အမှန်အားဖြင့် လူနှင့်ဝေးသည်.ကျောက်ဆောင် လိုဏ်ဂူများကြားတွင် နေထိုင်လေ့ရှိသည်။ အုပ်စုဖွဲ.နေတတ်၍ တစ်အုပ်စုလျှင်ထောင်ပေါင်းများစွာပါဝင်၏။ မြေပြင်တွင်ကျက်စားလေ့မရှိေ​ ပ။ ဝေဟင်နှင့် ပင်လယ်ရေပြင်ထက်တွင် ပျံသန်းစဉ် တောင်ပံပါအင်းဆက်များကို ဖမ်းယူစားသောက်ပေသည်။ သို.သော်လည်း အခုလိုလူနေထူထပ်သည်. နေရာတွင် ဤကဲ့သို. အိမ်အတွင်း၌ အသိုက်ဖွဲပြီး နေထိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ အထူးပင်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပေသည်။
ထိုငှက်လေးများသည် စာကလေးအရွယ်ခန်.သာရှိပြီး မီလီမီတာ၁၀၀ မှ ၄၀၀ အတွင်းရှိသည်။ ပျံလွှားငှက် အမျိုးစားတွင်ပါဝင်သည်။ ကျောဖက်ငှက်မွေးမှာ အမဲရောင်ရှိပြီး ၀မ်းဖက်ငှက်မွေးမှာ မီးခိုးရောင်ဖြစ်နေ၏။ ဦးခေါင်းမှာ သေးလုံးနေပြီး ကတော့ပုံရှိ မာသောနုတ်သီးနှင်. ကျယ်သော ပါးစပ်ပေါက်ရှိသည်။ တောက်ပံသည်ချွန်ပြီး အမြီးတိုသောကြောင့် ပျံသန်းမှု.ကို လျှင်မြန်စေသည်.အပြင် ညအိပ်သည်.အချိန်မှလွဲ၍ တနေ.လုံးပျံသန်းနိုင်သည်။ တိုပြီးကောက်နေသော ခြေသည်းပါသည်. ခြေလေးချောင်းရှိ၏။ ခြေချောင်း လေးချောင်းအနက်(၃) ချောင်းသည်အရှေ့ဖက်သို. ကား၍ညွန်.နေသောကြောင့် ကျောက်ဆောင် အစွန်းနှင့် အဆောက်အဦးများတွင် ခိုင်မြဲစွာ ကုတ်တွယ်ထားနိုင်သည်။
ထိုဇီဝစိုးငှက်လေးများသည် တိမ်ရှိသည်.နေရာထိမြင့်မားစွာ ပျံသန်းနိုင်၍ အမြင်အာရုံစူးရှပြီး လျှင်မြန်ဖြတ်လတ်၏။ ထို.ကြောင့် တချို.က တိမ်ညွန်.ကို စားသည်.ငှက်ဟု တင်စားခေါ်ဝေး၏။ မျိုးပွားရာသီဖြစ်သော ဇန်န၀ါရီလ၊ ဧပြီလနှင့် သြဂုတ်လများတွင် ငှက်သိုက်ပြုလုပ်တတ်သည်။ ၎င်းတို.၏အသိုက်များသည် အခြားငှက်များကဲ့သို. သစ်ရွက် သစ်ကိုင်းများဖြင့် မပြုလုပ်ပဲ ထူးဆန်းစွာ အာခေါင်မှ အစေးတမျိုးကို အန်ထုတ်၍ အသိုက်ပြု.လုပ်ကြသည်။ ငှက်၏တံတွေဂလင်းမှ စစ်ထုတ်လိုက်သော တံတွေရည်များနှင့် ချေဖျက်ပြီး အစာချေရည်တချို.ပါဝင်၏။ ယင်းတံတွေများသည် လေနှင်ထိတွေသည်.အခါ မာကြောသွား၏။ ယင်းအံဖတ်များကို ထပ်ခါ ထပ်ခါအံပြီး နုတ်သီဖြင့် ခွက်ပုံသဏ္ဍန်ဖော်ပေးသည်။ တခါတရံ အံရလွန်းသဖြင့် သွေးစလေးများပင် ပါလာတတ်ပေသည်။
တိုကဲ့သို. အသိုက်ပြုလုပ်ခြင်းကို ဇီဝစိုး ငှက်အထီးကသာ ပြုလုပ်ပေးသည်။ ငှက်သိုက်မှာ မိခင်ငှက်မတစ်ကောင်နှင့် ငှက်ပေါက်စနှစ်ကောင် နေရန် လုံလောက်သည်။ ယင်းအသိုက်များတွင် ငှက်မများဝင်ဥကြသည်။ တစ်နှင်လျင် နှစ်ကြိမ်ဥပြီး တစ်မြုံလျင် ဥနှစ်လုံးရှိသည်။ အများအားဖြင့် အထီးတစ်ကောင် အမတစ်ကောင်ပေါက်သည်။ ငှက်မသည် ငှက်ကလေးများကို နှစ်လကြာမျှ ကျွေးမွေးပြုစုပြီးနောက် အသိုက်မှဆင်း သွားကြသည်။ အဖြူရောင်ငှက်သိုက်တွင် အဖြူရောင်ငှက်မွေများပါပြီး​၊ အမဲရောင်ငှက်သိုက်တွင် အမဲရောင်ငှက်မွေးများ ပါရှိသည်။
ငှက်သိုက်၏ နဂိုပုံသဏ္ဍန်မှာ အဖြူရောင် ခွက်ပုံသဏ္ဍန်လုံးလုံးလေးတြွေ​ ဖစ်သည်။ထိုငှက်သိုက်ကို ရေနှင့်တစ်ည စိမ်လိုက်ပါက ဆေးကုလားမကဲ့သို. ဖြစ်သွားပေသည်။ ၎င်း၏ပင်ကိုယ်အရသာမှာ အနည်းငယ် ညှီစို.သောအရသာရှိသည်။ အရသာရှိစေရန် နို.၊သကြား အစရှိသည်. အရာများဖြင့်ရောစပ်ပြီး သောက်သုံးကြပါသည်။ နလံထလူမမာများ၊ ခွဲစိတ်ပြီးစလူနာများ (အနာကျက်မြန်စေရန်)၊သက်ကြီး​ရွယ်အိုများ သောက်သုံးကြပါသည်။ကုန်ခမ်းသွားသောအားအင်များကိုအမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပြည်.၀
စေသည်ဟုဆိုပါသည်။ တရုတ်ပြည်တွင် အထူးနှစ်သက်စွာ ဈေးကြီးပေးဝယ်ပြီး စားသောက်ကြပါသည်။ သုံးလလျှင်တကြိမ်ခန်. အသိုက်ခွါယူရောင်းချပါသည်။ တကြိမ်ရောင်းရငွေမှာ သိန်းငါးဆယ်မှ သိန်းခြောက်ဆယ်ခန်.ရရှိပါသည်။
အခုချိန်တွင် အဆိုပါအိမ်မှ မျိုးပွားလာသည်.ငှက်ကလေးများသည် ဤအိမ်တဆောင်တည်းတွင် မလုံလောက်ပါသဖြင့် အနီးနား ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်များသို. ပျံ.နံ.နေထိုင်ပြီး အသိုက်လုပ်နေထိုက်လျက်ရှိသည်။ အခုနောက်ပိုင်း ဆောက်လုပ်သည်.အိမ်များတွင် ငှက်များနေထိုင် ရန်အတွက် အပေါ်ဆုံးတွင်သီးသန်. တထပ်ဆောက်လုပ်ပြီး ငှက်ခေါ်သံ အတုဖန်တီးပြီး မြူဆွယ်ခေါ်ယူလျက်ရှိသည်။ တချို.မှာ ပုံတွင်ပြထားသကဲ့သို. သီးသန်.လူမနေပဲ သိန်းထောင်ချီတန်သည်. သုံးထပ်တိုက်တစ်လုံးဆောက်၍ ခေါ်ယူကြပါသည်။
ဆေးမသုတ်ထားသော ငှက်ခေါ်ရန်သီးသန်. ဆောက်လုပ်ထားသည်. ပြတင်းပေါက်မရှိသော ကွန်ကရက်သုံးထပ်တိုက်။ (ခေါ်ယူချိန် တစ်နှစ်အတွင်းတွင် ငှက်များအသိုက်လာစွဲနေပါပြီ​။)
ဤကဲ့သို.ခေါ်ယူလျင်လည်း တနှစ်လောက်ကြာလျင် ငှက်များဝင်ရောက် အသိုက်ဖွဲ.နေထိုင်လျက်ရှိပေ​သည်.။ ငှက်ခေါ်သံအတုကို စီဒီအခွေဖြင့် နှစ်ဆယ့်လေးနာရီဖွင့်ထားလျှ​င် မိုင်ငါးဆယ်ပတ်လည် အဝေးမှရှိနေသည်. ငှက်များပင် ကြားနိုင်သည်ဟု. ဆိုပါသည်။ အကယ်၍ ဤကဲ့သို. ခေါ်ယူ၍ ငှက်များအသိုက်လာမစွဲနိုင်လျှင် ယခင်အသိုက်စွဲထားသော အိမ်များမှငှက်၏မစင်ကိုယူ၍ ကြဲပက်ထားလိုက်လျှင် အဆိုပါမစင်အနံ.ကြောင့် မကြာမှီအသိုက်လာစွဲသည်ဟုလည်း သိရပါသည်။ ထို.ကြောင့် အဆိုပါငှက်၏ မစင်များသည်လည်း ဈေးကောင်းပေးဝယ်နေကြပါသည်။​ အခု.ချိန်တွင် မြိတ်မြို.နေရာ အတော်များမျာတွင် ငှက်ခေါ်သံ တညံစီစီဖြင့် ကြားနေရပေသည်။
စာချစ်သူမိတ်ဆွေများ ဗဟုသုတရစေခြင်းအလို.ငှာ ဒီနေရာကနေ ပြန်လည် မျှဝေဖော်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။
Posted by မောင်မောင် at 13:03
သွေးစပါအောင်အန်ပြီး ဆောက်တဲ့ အသိုက် တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်ပေါင် ။